Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguJennifer
I-bungalow ngomhla wesi-4 yakhiwa ngo-1925 kwilali yaseQuantico (ngoku eyidolophu). Ndiyilungisile kwaye ndayivula ngo-Oct 2021 njengerenti yexesha elifutshane. Ikhaya lithe cwaka kwaye lipholile. Ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukuya kuloliwe wase-Amtrak/VRE, uMlambo iPotomac kunye neQuantico Marina, kunye neeresityu. Uya kuyithanda le dolophu yakudala inobubele ngoku ingqongwe lufakelo lomkhosi.
Ukuba awunaso i-ID ye-DOD uya kudinga i-Vitor pass. Iziko labatyeleli li-7am-3pm M-F (7-11 AM Sat).
Eli likhaya leBungalow losapho olunye elinegumbi lokuhlala, indawo yokusebenzela enikezelweyo, indawo yokutyela enetafile kunye nezitulo ze-6, ikhitshi eligcweleyo, kunye negumbi lelanga elimiselwe njengendawo yencoko yekofu / yewayini. Ikhaya lihonjiswe ngobumnandi ngokuchukumisa iMarine Corps eneefoto/amakhadi eposi eQuantico ubukhulu becala ukusukela ngexesha lokwakhiwa kwekhaya.
Kukho amagumbi okulala ama-2 ekhaya ngalinye linekhabhathi enkulu. Kukwakho nebhedi yesofa eyindlovukazi kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela elipheleleyo elineshawa yeglasi ngasemva kwekhaya.
Xa ungena ekhaya uya kufumana iholo yokubeka idyasi yokugcina iidyasi/izipaji/izihlangu kwaye uya kubona nendawo yokusebenzela ezinikeleyo (idesika kunye nesitulo). Ifeni yesilingi isantya esilungelelanisiweyo kwaye ungasebenzisa i-fan ngaphandle kokukhanya ngokunjalo.
Igumbi lokuhlala line-42 "i-TV elawulwa kude kunye neenkonzo zokusasaza, isitulo esikhulu, i-sofa-bed couch ekhululekile, i-ottoman apho umphezulu ujika usetyenziswe njengetafile. phantsi kweTV eneencwadi ezikhethiweyo kunye nemidlalo yokuzonwabisa.Ukukhanya kwigumbi lokuhlala kunokugcinwa okuncinci kwiishelufa kunye namazibuko e-USB.Isofa yi-Amalfi sleeper sofa eyenziwe ngamaTaliyane kunye ne-1 "gel-infused memory foam. Umatrasi ongasebenza njengebhedi eyongezelelweyo kwigumbi lokuhlala Kukho iilinen ezigcweleyo zebhedi ezibekwe kwidrowa yebhedi yetrundle.
Igumbi lokutyela linetafile yeenkuni kunye nezitulo ezi-6, kukho igqabi elikhoyo lokwandisa itafile ukuba liyanqweneleka. Igumbi lokutyela linokukhanya okumangalisayo okunokuncipha kwaye umbala unokuhlengahlengiswa kwizibane ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kukhetho lwakho.
Igumbi lokulala lokuqala lingaphambili kwekhaya (ngaphandle kwegumbi lokuhlala) linebhedi enkulu yokumkanikazi, ikhabhathi enkulu, isinxibo sedrowa ezi-3, indawo yokulala enesibane kunye nezibuko le-USB, kunye ne-32" yeTV elawulwa kude kunye neDisney + kunye nolunye usasazo. ekhoyo.
Igumbi lokulala lesibini lisembindini wekhaya, ngaphandle kwegumbi lokutyela kwaye linobungakanani obungamawele e-IKEA Hemnes daybed ene-trundle yokukhupha. Ukukhupha i-trundle kudala ibhedi yesibini enobungakanani obungamawele. Ibhedi yesibini ayinakohlulwa kwi-daybed engundoqo. Ibhedi ye-trundle inazo iidrowa ezinkulu zokugcina ngaphantsi. Iilinen zombhede we-trundle, kunye ne-sofa-bed yegumbi lokuhlala zigcinwe kwiidrowa, kunye neengubo ezongezelelweyo. Kukho ikhabhathi encinci ebonisiweyo (incinci nangona) kwaye ngaphakathi kwekhabhathi kukho ishelufu encinci kwicala lasekunene lekhabhathi enokhetho oluncinci lwezinto zokudlala kunye neencwadi zabantwana ezinokusetyenziswa nazo.
Igumbi lokuhlambela elihle libonisa ukukhanya okukhanyayo kwekristale, iitawuli ezinobunewunewu, ishawa enentloko yeshawa-mbini (enesitshizi esikhutshwayo), into engamampunge enendawo yokugcina ngaphantsi, inqwelo ecaleni kwamampunge okugcina okongeziweyo, kunye nekhabhathi yamayeza evula ukubonelela ngogcino. kwizinto zakho ezincinci.
Ikhitshi linendawo eninzi yekhabhathi yokugcina ukutya kwaye igcwele i-dinnerware ye-6 ukubandakanya iipleyiti, izitya, iikomityi, izitya zokutya, iimagi kunye nesidlo sabantwana sabantwana. Iikhabhinethi zinayo yonke into oyidingayo xa upheka ukutya okulula okanye okunencasa kunye nokutya okuthambileyo okunje: izitya zokuxuba, isethi epheleleyo yeembiza & neepani ukubandakanya igriddle, umenzi wepopcorn, imbiza yokutyela, itoaster, amashiti okubhaka, ipani yekeyiki, kunye nezinto ezininzi zokupheka. Iimaphu zokubeka kunye ne-napkins zinikwe ngokunjalo.
Kukho i-microwave phezu koluhlu lwegesi. Ikhitshi ilayitiwe kakuhle yenza kube lula ukuyipheka. Akukho matshini wokuhlamba izitya kodwa indawo yokubeka isitya kunye nesepha / ibrashi zibonelelwa ngokucoca izitya (ezibekwe phantsi kwesinki). Nceda ucoce izinto emva kokusetyenziswa.
Sebenzisa umenzi wekofu ukwenza isimbo sokuthontsiza okanye ikomityi ye-K okanye itshokolethi eshushu. Izinto ezahlukeneyo zokukhetha ikofu zibonelelwa ngokuncomekayo kwikhawuntara yekhitshi kunye nakwikhabhathi ngaphezulu komenzi wekofu.
Ngaphandle kwekhitshi kukho ikofu emini/iwayini ebusuku kwindawo yokuhlala 2. Ifeni yesilingi engaphezulu kwendawo yokuhlala inezibane eziluzizi ukuze ukonwabele eyakho ingokuhlwa yokuphumla ngelixa ujonge ngasemva kwendlu ngeefestile ezinkulu.
Ngasemva kweyadi inezibane zentambo kunye nesibane esisetyenziswayo. Kukho itafile enezitulo ezi-4 eyadini ukuze zisetyenziswe ngokunjalo. Le ndawo ikufuphi namanzi ngoko qaphela iingcongconi (ngonyaka). Ungatshintsha ukukhanya ngaphandle kunye ne-remote control ebekwe yi-backdoor. Isango elingaphaya kweyadi likhokelela kwi-alleyway apho ungathatha indlela emfutshane ukuya kwisitrato esikhulu sesidlo sakusihlwa, njl.
I-wi-fi yasimahla iyafumaneka kulo lonke ikhaya.
42" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Disney+
I-bungalow ngomhla we-4 ibekwe kwidolophu eyimbali yaseQuantico (Q-Town). Eli khaya losapho olunye lakhiwa ngo-1925, xa iDolophu yaseQuantico yayisandula ukuqala, naphambi kokuba iMarine Corps yenze iQuantico ikomkhulu labo.
Ipropathi ikwanegaraji eyahlukileyo eneflethi ngaphezulu kwayo enomqeshi ekwabelwana naye ngasemva kwendlu.
My daughter and I are excited to be hosting our first AirBnB as my plan to help save for her college! I've lived in this beautiful area for 13 years and look forward to helping all guests have a great experience in the area.
Ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha, ndihlala ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka kwipropathi kwaye ndinokudibana ngokobuqu ngayo nayiphi na inkxalabo. Iindwendwe ziya kuzijonga kwaye ziphume zisebenzisa iphedi yamaqhosha.
Ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha, ndihlala ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka kwipropathi kwaye ndinokudibana ngokobuqu ngayo nayiphi na inkxalabo. I…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quantico